Synergy: Ahoana no hanamafisan'ny mpivarotra ny haino aman-jery tompony miaraka amina tompony | Martech Zone
Synergy: Ahoana ny fanamafisan'ny mpivarotra ny haino aman-jery tompony miaraka amina tompony
Alatsinainy Desambra 18, 2017 Talata, Janoary 12, 2021 John Koetsier
Ny fikarakarana marketing ara-barotra sy marketing an-tsokosoko dia mitaky vidim-piainana, laharana ary fidiram-bola. Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia manombatombana amin'ny fantsona tsirairay, na, mizara ny varotra, karama ary tompony.
Avelanao eo ambonin'ny latabatra ny 50-100% amin'ny valiny mety hitranga.
Vao tsy ela akory izay no nanontaniako CMO efa ho zato sy ireo mpitantana marketing: Ahoana ny fiantraikan'ny varotra biolojika sy karama eo amin'ny samy hafa? ny valiny nahagaga tokoa, ary nanome porofo matanjaka fa ny mpivarotra dia tokony hikatsaka sy hitrandraka synergie tsy ao anatiny ihany fa eo anelanelan'ny fantsom-barotra rehetra.
Ny sosialy dia ohatra miharihary.
Ny ankamaroan'ny marika dia mihinana sosialy biolojika miaraka amin'ny karama kely. Saingy ny mpivarotra sasany dia mahita fa ny tombony dia mihoatra lavitra noho ny valiny media sosialy tsara kokoa. Ohatra, angamba… amin'ny varotra fikarohana biolojika.
Nanangana doka Facebook izahay hampiroboroboana fanomezana maimaimpoana amin'ny fitsangatsanganana. Izany dia niteraka fidinana, fizarana, bitsika an'arivony ary rohy miditra 50 avy amin'ny bilaogy fitsangatsanganana. Ny fivezivezena amin'ny fikarohana voajanahary dia nihatsara 35% tao anatin'ny roa volana satria ny fizarana ara-tsosialy sy ny rohy miditra dia singa lehibe amin'ny algorithm Google. Amine Rahal, mpanorina sy CEO an'ny Little Dragon Media
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fiaraha-miasa ara-tsosialy dia nahatonga ny fahazoana tombony ara-tsosialy nitarika ny fahazoana SEO nitarika fifamoivoizana an-tranonkala.
Izany dia rojom-pifandraisana mahafinaritra, raha mpivarotra manana teti-bola voafetra ianao.
Ohatra hafa? Pay-per-click amin'ny SEO biolojika.
Ny zava-misy fotsiny hoe mitondra fifamoivoizana fanampiny amin'ny tranokalanao ianao dia misy fiatraikany tsara amin'ny ankapobeny:
Amin'ny salan'isa, nahita fiakarana 10 hatramin'ny 20% tamin'ny fivezivezena fikarohana voajanahary izahay ho an'ny teny lakile sy andian-teny izay apetraka koa ny doka, indrindra ny manodidina ny fikarohana marika. Ireo dokam-barotra ireo koa dia tena mora vidy sy mandeha tsara, satria ambany kokoa ny vidiny. Kent Lewis, mpanorina ary filohan'ny Anvil
Maninona no mandeha ity asa ity?
Laura Simis avy amin'ny Coalmarch dia nilaza fa satria ny fifamoivoizana ao amin'ny pejy dia antony iray amin'ny laharan'ny pejy valin'ny motera fikarohana, ny fanamafisana ny fifamoivoizana amin'ny pejy iray manokana amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao karama dia afaka manatsara ny fahaizan'io pejy milahatra tsara io.
Noho izany, karazana fiakarana inona no azonao vokarina amin'ity teknika fampiraisana SEM sy PPC ity? Ireo mpivarotra izay nanaovako fanadihadiana dia nilaza fa ny valim-pikarohan'izy ireo dia 10 ka hatramin'ny 40% no nakarina. Mety tsy hanimba ny tany izany… fa maimaim-poana izany amin'ny ankapobeny.
Ohatra iray tena mahaliana: SEO biolojika sy doka fiantsenana Google voaloa.
Ity dia niteraka fitomboan'ny 7X fidiram-bola ho an'ny mpivarotra iray.
Alison Garrison, talen'ny varotra zokiolona ao amin'ny Volusion, sehatra ecommerce ho an'ny SMBs, dia nahitana 12 miliara nandritra ny roa volana ny fitrandrahana ny milina fikarohana voajanahary rehefa nampiana doka Google Shopping.
Taorian'ny nanombohany ny fampielezana feed feeds, ny asa SEO izay efa iray taona teo ho eo dia nahazo tanjaka lehibe, ary ny fivezivezena avy amin'ny fikarohana voajanahary dia nitombo 325% amin'ny ankapobeny ary mihoatra ny 400% avy amin'ny finday irery isan-taona. Alison Garrison
Fa ny fidiram-bola dia nitsambikina tanteraka tamin'ny tampon-trano ihany koa… ao anatin'izany ny vola miditra amin'ny fikarohana voajanahary.
Ny vola azo tamin'ny fikarohana voajanahary dia nitombo 240% nandritra izany fotoana izany. Ny dokam-barotra amin'ny tsena fiantsenana dia fanalahidin'ny fahombiazana eto - ny fivezivezena amin'ny ankapobeny dia nitombo maherin'ny 2,500%, ny fivezivezena finday nitombo mihoatra ny 10,000%, ny vola miditra nitombo mihoatra ny 800%, ny vola miditra amin'ny finday dia nitombo mihoatra ny 80,000% - fa tsy typo.
Mazava fa ny mpanjifany dia nanomboka tamin'ny fidiram-bola kely sy tranokala kely. Ary, misy fampandrenesana roa lehibe hafa. Voalohany: nanambola nandritra ny herintaona izy tamin'ny fanatsarana ny motera fikarohana. Izany ny fanoloran-tena sy ny ezaka - ary fomba fijery maharitra - izay tsy hitanao matetika. Ary roa: ny kilometatrao dia mety miovaova. Satria tsy mikendry ny volana ny mpivarotra iray ary mikapoka ny kintana dia tsy midika hoe hahatratra vokatra mitovy ny mpivarotra rehetra.
Mbola mahavariana ihany ny valiny.
Ary, farafaharatsiny, ny valin'i Garrison dia manaporofo ny filàna synergie eo amin'ny fantsom-barotra. Ireo mpivarotra izay tsy mitady sy mitrandraka synergie eo amin'ny fantsom-barotra mahazatra sy karama dia tsy mahazo volamena madio.
Ny fandalinana feno miaraka amin'ny hevitra avy amin'ireo mpivarotra rehetra niresahako dia misy maimaim-poana eto.
Ampidino eto ny fandinihana feno
Tags: Alison Garrisonallison garrisonriandrianasaribaoKent Lewislaura simis-barotrafantsom-barotraomnichannelhaino aman-jery organikafikarohana biolojikaseo organikahaino aman-jery tomponyhaino aman-jery karamafikarohana karamappcvolusion
John Koetsier dia mpanao gazety, mpandalina ary futurist. Amin'ny maha mpahay toekarena finday azy ao amin'ny Tune, Maminavina sy mamakafaka ireo fironana misy fiatraikany amin'ny tontolo iainana finday aho. Izaho dia mpanao gazety, mpandalina ary mpanatanteraka orinasa, ary nitantara ny fiakaran'ny toekarena finday. Talohan'ny nidirako tao amin'ny TUNE dia nanangana ny ekipa mpikaroka VB Insight ao amin'ny VentureBeat aho ary nitantana ekipa mamorona rindrambaiko ho an'ny mpiara-miasa toa an'i Intel sy Disney. Ho fanampin'izay, nitarika ekipa teknika aho, nanangana tranokala sosialy sy fampiharana finday ary nifampiresaka tamin'ny finday, sosialy ary IoT. Tamin'ny 2014, voatonona ho 100 an-tampon'ny Folio amin'ireo "mpandraharaha vaovao indrindra sy mpampihorohoro amin'ny tsena" ny indostrian'ny haino aman-jery. Mipetraka any British Columbia, Kanada miaraka amin'ny fianakaviako aho, izay toerana anazaranay manao baseball sy hockey, na dia tsy miaraka amin'izay aza.
Inona ny ROI an'ny mpanjifa mahatoky?
Maty tokoa ve ny tsy fivadihan'ny marika? Sa tsy fivadihan'ny mpanjifa?